प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अपमान गर्ने गरी केही नभनेको बताएका छन् ।
यति धेरै वकिल हुँदाहुँदै हजुरबुवा उमेरको अधिवक्तालाई किन दुःख दिएको भनेको ओलीले दावी गरे ।
‘एक जना ज्येष्ठ नागरिक भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्दर्भमा मैले के भनेको थिए भने – यत्रो विघ्न वकिल हुँदा ९४ वर्षको हजुरबा उमेरको व्यक्ति उहाँलाई किन दुःख दिएको भनेको । अदालतको मानहानी गर्‍यो भनेर फेरि मुद्दा हाल्ने ? मानहानी भयो त्यहाँ ? मुद्दा हाल्नु पर्‍या त्यहाँ ?’ सोमवार नेकपाले दाङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भने ।
नेकपा समर्थित पत्रकारहरूको संस्था प्रेस संगठनको केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले वृद्ध वकिललाई लगेर ‘तमासा’ गरेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरूले आइतवार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्र अदालतको सम्मान गर्न र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मान्न प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई सुझाव दिए ।
‘हामी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतामा जाने भनेका छौं, उहाँहरू आत्तिनुभएको छ । मुद्दाका लस्कर हेर्नुस्, राजनीति गर्नुहुन्छ कि झगडा गर्नुहुन्छ । ठीक छ, मुद्दा हाल्न पाउनुहुन्छ, अदालतलाई धम्काउन पाउनुहुन्न, स्वतन्त्र अदालतलाई सम्मान गर्न सिक्नुस्,’ ओलीले भने ।